एउटै व्यक्ति कांग्रेसको वडा उपसभापति र एमालेको सचिवमा चयन, कसरी भयो यस्तो ? — Sanchar Kendra
दार्चुला । दार्चुलामा कांग्रेसको अधिवेशनबाट वडा उपसभापतिमा चयन भएका एक जना एमालेको वडा सचिवमा चयन भएका छन् ।
गत ९ असोजमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको वडा महाधिवेशनबाट शंकर सिंह डोबाल महाकाली नगरपालिका–२ को उपसभापतिमा चयन भएका थिए । शनिबार गरिएको नेकपा एमालेको वडा अधिवेशनमा डोबाल सचिवमा चयन भएका हुन् ।
कांग्रेसले सम्पन्न गरेको वडा अधिवेशनमा डोबाल उपसभापतिमा चयन भएको तर उनी एमालेमा प्रवेश गरे नगरेकोबारे जानकारी नभएको कांग्रेस महाकालि नगरपालिकाका प्रवक्ता पदम सिंह महरले बताए ।
यता नेकपा एमालेको आसन्न महाधिवेशनका लागि सुरू भएको वडा अधिवेशनमा बागलुङका ७१ वडामा नेतृत्व चयन भएको छ । तीमध्ये नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता शून्य रहेको छ ।
पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका पुरष नेतामाथि अन्याय हुने ठानेर पनि कतिपय महिला नेतृत्वमा आउन हिच्किचाउने गरेका छन् । समावेशिताका नाममा महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउँदा पुरुषलाई अन्याय हुन्छ की ? भन्ने दयापूर्ण मनोदशा पनि बेलाबेला राजनीतिमा देखा पर्छ । प्रदेशसभा सदस्य रानाले अहिलको वडा अधिवेशनमा महिलाहरु पनि नेतृत्वका हकदार हुन् र उनीहरु सक्षम छन् भन्ने परिदृश्य देखिएको बताए।
एमाले जिल्ला सचिव विष्णु भुसालले अध्यक्षमै नआएपनि पदाधिकारीसहित किमिटिमा महिलाहरुको राम्रो उपस्थिति रहेको बताए । “वडा कमिटिमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी नै महिलाहरु चुनिनुभएको छ, यसलाई राम्रो उपलब्धि मान्नुपर्छ’, उनले भने। योगदान, क्रियाशीलता, समय व्यवस्थापन आदि कारणले नेतृत्वमा पुरुषको अग्रसरता बढी देखिनु स्वभाविक रहेको सचिव भुसालले बताए ।
वडा तहमा बसेर पार्टी काममा क्रियाशील हुने महिलाहरुको संख्या न्यून भएको स्थितिमा अहिले देखिएको सहभागितालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘नेतृत्वमा महिला आउन असक्षम हुनुहुन्छ भन्ने होइन, यही प्रक्रियाबाट महिला अघि आउने वातावरण बन्छ, पार्टीले त्यसका लागि उपयुक्त भूमिका खेल्छ’, उनले भने। सचिव भुसालले समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेर पार्टी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।